पर्यटकका लागि खुला हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
पर्यटकका लागि खुला हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन !
जेठ २५, २०७६ शनिबार ७:१०:३० | एजेन्सी
अर्को वर्ष पर्यटकहरु नासाको अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा जान सक्ने भएका छन् । यसका लागि उनीहरुले एक रातको ३५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नासाका अनुसार निजी अन्तरिक्ष यात्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनसम्म जानलाई ३० दिनको समय दिइनेछ । उनीहरु अमेरिकी स्पेसक्राफ्टबाट यात्रा गर्नेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन अन्तरिक्षको बाहिरी भागमा रहेको छ । यसबाट अन्तरिक्षसँग जोडिएका विषयमा अनुसन्धान गरिँदै आएको छ ।
यो स्पेस स्टेसन एक प्रकारले कृत्रिम उपग्रहजस्तै हो । जहाँ मानिस रहेका हुन्छन् र काम पनि गरिरहेका हुन्छन् । खोज तथा अनुसन्धानका लागि यसको व्यापक प्रयोग हुँदै आएको छ ।
नासाका अनुसार निजी कम्पनीले नै क्रू मा को–को रहने भन्ने कुराको तय गर्नेछन् । साथै अन्तरिक्ष यात्रीको अन्तरिक्ष उडानका लागि चाहिने तालिम तथा स्वास्थ्य सेवा पनि उसैले उपलब्ध गराउनेछ । हरेक वर्ष १२ जना निजी अन्तरिक्ष यात्रीलाई स्पेस स्टेसनमा लगिनेछ ।
नासाले यसका लागि दुई वटा कम्पनीलाई नियुक्त गरेको छ । एउटा एलन मस्कको स्पेस एक्स छ घने अर्को बोइङ । स्पेस एक्सले आफ्नो ड्रागन क्याप्सुलमार्फत यात्रीलाई अन्तरिक्षमा लैजानृछ भने बोइङले बोइङ स्टारलाइनर नामको स्पेसक्राफ्ट बनाइरहेको छ । यी कम्पनीले यात्रीसँग त्यति नै पैसा लिनेछ जति नासाले आफ्ना अन्तरिक्ष यात्रीसँग लिँदै आएको छ ।
यसभन्दा पहिले नासाले स्पेस स्टेसनलाई व्यावसायिक प्रयोग हुनबाट रोकेको थियो । नासाबाट गएका अन्तरिक्ष यात्री कुनै कम्पनीका लागि अनुसन्धानमा भाग लिन पाउँदैनथे ।
यो स्टेसनको मालिक नासा त होइन । रुससँग मिलेर अमेरिकाले सन् १९९८ मा यो स्टेसन बनाउन सुरु गरेको थियो ।
सन् २००१ मा अमेरिकी व्यापारी डेनिस टिटो अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा जाने पहिलो पर्यटक थिए । उनले दुईतर्फी यात्राका लागि रुसलाई दुई करोड अमेरिकी डलर तिरेका थिए ।
फाल्गुनन्दको समाज सुधार मुचुल्का : छोरासरह छोरीलाई शिक्षा, हि...
टी–१० लिग खेल्नका लागि पूर्व कप्तान पारस आज यूएई जाँदै
युभेन्टसको जितमा डिबालाको गोल
एएफसी यू–१९ च्याम्पियनसिप छनोट: अन्तिम खेलमा किर्गिस्तानसँग ने...
उपचुनाव: कास्कीमा एक जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, बागलुङमा नेकपा...
काठमाण्डौ उपत्यकाका सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्न सडक विभ...
यस्ताे रह्याे आइतबार सुनचाँदीकाे भाउ: भन्सार शुल्कका कारण मूल्...
कानुन अभावका कारण पानी जहाज सञ्चालनकाे काम अगाडि बढेन
कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगका सबै सीमा समस्या समाधान गरिन्छ: ...
जाजरकाेटमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अब पुरोहितले नागरिकता...
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी: प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका सबैले राजीनामा दिने